May 12, 2019 - CeleLove
May 12, 2019 Cele Love 0
G fatt ကိုယ်တိုင်ရေးစပ်ပြီး နန်းဆုသီဆိုထားတဲ့ ကမ်းမဲ့လှေသီချင်းသစ်ဗီဒီယိုဖိုင်လေး ပရိသတ်တွေရဲ့ အချစ်တော်လေး ကွီးgfattကတော့ ပရိသတ်တွေရဲ့ အသည်းကျော်အဆိုတော်တစ်ယောက်ဖြစ်ပြီး ပရိသတ်တွေရဲ့ ရင်ထဲမှာနေရာတစ်ခုရယူထားနိုင်တဲ့ ပရိသတ်အချစ်တော်အဆိုတော်တစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်။ ဆယ်ကျော်သက်တွေရဲ့ အသည်းစွဲအဆိုတော်တစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ ကွီးgfattကတော့ ယခုမှာ နန်းစုနဲ့ ချစ်သူတွေဖြစ်နေကြပြီ ပဲ ဖြစ်ပါတယ် …။ နန်းစုကတော့ ပရိသတ်တွေရဲ့ ရင်ထဲမှာနေရာတစ်ခုရယူထားနိုင်တဲ့ […]
“ဘုရားကို ဘာကြောင့်ရှိခိုးရသလဲ” ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တိုင်း မဖြစ်မနေ သိထားသင့်တာမို့ မျှဝေလိုက်ရပါတယ် ” ဘုရားရှင်ဟာ မိမိဆန္ဒအလျောက် ဘုရားဖြစ် အောင် ကျင့်တယ် ။ ဘုရားဖြစ်ပြီးနောက် ပရိနိဗ္ဗာန်ပြု သွားပြီး ဖြစ်တယ် ။ ဒီအတွက် အခြားသူတွေက ဘာရှိခိုးဦးချနေစရာ လိုသလဲလို့ ကျဉ်းမြောင်းတဲ့ အမြင်နဲ့ တွေးခေါ် […]
တစ်မိနစ်အတွင်း အိပ်ပျော်စေမယ့် နည်းလမ်း စိတ်ဖိစီးမှုတွေ များနေတယ် ဆိုရင်၊ စိုးရိမ်စိတ်တွေ များနေတယ်ဆိုရင် အိပ်ပျော်ဖို့ မလွယ်တော့ပါဘူး။ အိပ်ပျော်ဖို့ ဆိုရင် စိတ်ကို ငြိမ်ငြိမ်ထားဖို့ လိုအပ်လာပါပြီ။ တစ်မိနစ်အတွင်း အိပ်ပျော်စေမယ့် နည်းလမ်းကို 4-7-8 နည်းလမ်းလို့ ခေါ်ပါတယ် …။ 1. လေကို4[…]
လူကြီးက ဖုန်းကလိနေတုန်း ကလေးထည့်ထားတဲ့ တွန်းလှည်းကို ကုန်တင်ကားကြီးကြိတ်သွားတဲ့ ဗွီဒီယိုဖိုင်ထွက်ပေါ် လူကြီးက ဖုန်းကလိနေတုန်း ကလေးထည့်ထားတဲ့ တွန်းလှည်းကို ကုန်တင်ကားကြီးကြိတ်သွားတဲ့ ဗွီဒီယိုဖိုင်ထွက်ပေါ်လာခဲ့ပါတယ် …။ ဒီပို့လေးက ယမန်နေ့က တင်ခဲ့တဲ့ပို့လေးပါ။ တစ်ချို့လူတွေက ပုံပဲပါတာဆိုတော့ သိပ်ယုံကြလို့ အခု ဗွီဒီယိုဖိုင် ထွက်လာလို့ ပြန်တင်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။ကလေးအမေတစ်ယောက်ရဲ့ ပေါ့ဆမှုကြောင့် တစ်သက်တာလုံး […]
လေတိုးရင် ကျိုးတော့မလို ခါးလေးကို ပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ ပဲခူးသူလေး သူမကတော့ ခါးသေးလွန်းလို့ နာမည်ကြီးနေတဲ့ ပဲခူးသူလေးပါ ပဲခူးတက္ကသိုလ်မှာ Botany မေဂျာနဲ့ ကျောင်းတက်နေသူလေး ပဲ ဖြစ်ပါတယ် …။ သူ့လို ဘော်ဒီအချိုးအစား ရှိတဲ့သူဟာ တစ်ထောင်မှာ တစ်ယာက်တောင်ရှိမယ်မထင်ပါဘူး သူ့ခါးလေးက လေတိုးရင် ကျိုးလုမတတ် သေးငယ်လှပါတယ် […]
FA တွေ (၇) ရက်အတွင်း ချစ်သူရစေမယ့် အထိရောက်ဆုံး နည်းလမ်း(၇)မျိုး သင့်ကို သူငယ်ချင်းတွေက FA တစ်ယောက်ဆိုပြီး အမြဲတမ်း ၀ိုင်းနှိမ်နေတာကို ခံနေရပြီလား။ ဒါမှမဟုတ် ကိုယ်သေ ဘာကျတဲ့ ကောင်မလေးတွေ ရှိရဲ့သားနဲ့ ဘယ်လို ချည်းကပ်ရမှန်းမသိလို့ အခက်တွေ့နေတာလား။ ဒီနည်းလ မ်းတွေကို လုပ်ကြည့်လိုက်လေ။ […]
ဒီနည်းလမ်း(၄)သွယ်ကို အသုံးပြုပြီး ယောက်ျားတစ်ယောက်ကို ချုပ်ကိုင်နိုင်ပါတယ် ယောက်ျားတစ်ယောက်ကို (သူကိုယ်တိုင်တောင် မသိလိုက်ရပဲ)ဘယ်လို ကိုင်တွယ်ထိန်းချုပ်ရမလဲဆိုတဲ့ နည်းလမ်းလေးတွေကို ပျိုမေတို့ကို ပြောပြ ပေး ချင်ပါတယ်။ဒါဟာအမျိုးသမီးတိုင်း သိထားသင့်တဲ့ နည်းလမ်းလေးတွေ ဖြစ်ပါ တယ် ……….။ (၁) ဆိတ်ဆိတ်နေခြင်း ” ယောက်ျားတော်တော်များက စိတ်ဆိုးလာရင် ဒေါသတကြီးတုံ့ပြန်လေ့ရှိပြီး အတွင်းစိတ်ကို […]
မင်းမိန်းမကို ငါနဲ့ တစ်ညလောက် ပေးအိပ်ပါဆိုပြီး မိန်းမ လာငှါးသူ ရိုက်သတ်ခံရ လင်မယားနှစ်ဦးအိပ်နေစဉ် လူတစ်ဦးမှ မင်းမိန်းမနဲ့တစ်ညလောက်ပေးအိပ်ပါ လာပြောသဖြင့် တုတ်နဲ့ ရိုက်သတ် ၁.၅.၂၀၁၉.ရက်နေ့ည၉နာရီအချိန်လင်မယားနှစ်ဦးအိပ်ယာဝင်ခဲ့ကြောင်း။ည၁၂နာရီ၄၅မိနစ်အချိန်လူတစ်ဦးအိမ်ပေါ်ရောက်လာကာ ’မင်းမိန်းမနဲ့တစ်ညလောက်ပေးအိပ်ပါ။ဘဲတစ်အုပ်ပေးမယ်။ တစ်ညလောက်ပေးအိပ်ပါ’ ပြောဆိုနေသဖြင့် အပြောခံရသူအမျိုးသမီး၏ ခင်ပွန်းတော်စပ်သူက၎င်းပြောဆိုသူအထွက် အနောက်မှအရှည်(၇)ပေ။လုံးပါတ်(၈)လက္မခန့်ရှိ ကျွန်းသစ်သားတုတ်နှင့် ရိုက်သတ်ကာ စီမံကိန်းမြောင်းထဲတွင် ခြေထောက်နှင့်ပုဆိုးချိတ်ကာထားပြစ်ခဲ့သော လူသတ်မှုဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး […]
အပူချိန်ဆက်လက် မြင့်တက်နေပြီး (၄) ရက်အတွင်း အပူချိန် ပြန်ကျမည်ဟု ဒေါက်တာထွန်းလွင်ခန့်မှန်း မြန်မာနိုင်ငံအလယ်ပိုင်း ဒေသများတွင် အပူချိန်ဆက်လက် မြင့်တက်နေပြီး မြို့သုံးမြို့၌ ထပ်မံ၍ အပူချိန်စံချိန်သစ်တင်ခဲ့သည်။ လတ်တလော အပူဆုံးဒေသဖြစ်သော မကွေးတိုင်းဒေသကြီး၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးနှင့် ကယားပြည်နယ်ရှိ မြို့လေးမြို့တွင် မေလ၉ ရက်က အပူချိန်စံချိန်သစ်တင် ပြီးနောက် မေလ […]
လာပြန်ပြီ မြန်မာကျပ်ငွေကို ပြဲနေလို့ မသုံးရဘူးပြောတဲဘ ချောက်/ဆိပ်ဖြူ အနော်ရထာ တံတာ ဂိတ် တဲ့(ရုပ်သံ)ဲ့ အစက ဒီ video မရိုက်ဘူးနေခဲ့တာ ကားကို ဒီထဲမှာပါတဲ့ အကျီင်္အမဲနဲ့ အမက အုတ်ခဲနဲ့ ထုမယ်လုပ်တယ် အ့ဒါကြောင့် ဒီ video လေးရိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ် …. ။ […]